ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းတို့ ရဲ့အသက် လို့ ပြောရင် မှားလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ သာသနာကွယ်ပျောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကနေ စပြီး ကွယ်မယ်လို့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နက်နဲခက်ခဲတဲ့အတွက် ဉာဏ်အမြင် မလိုက်နာတော့လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) ပဌာန်း၊ ပစ္စယနိဒ္ဒေယ – အနက်အဓိပ္ပါယ်
Thu Sandar Aung says:
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလရဲ့Day3– အာရမ္မဏ ပစ္စယော ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး ။ပြန်တင်ပေးလို့ရရင် ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။မွန်မြတ်သောတရားအလှူအတွက်
Nay Ko Oo says:
တချို့ ဖိုင်တွေ မီဒီယာ ဖိုင်းယား မှာ ပျက်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပြန်တင်လို့ ရရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ ဓမ္မဆိုဒ်ကို ကြိုးစားပြီး ပြန် update လုပ်ပေးပါ့မယ်. အလုပ်မအားတာရော၊ ကျန်းမာရေးရော အင်တာနက်ပါ မကောင်းတာကြောင့် ကြန့်ကြာနေရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မေတ္တာရိပ်ဓမ္မဆိုဒ်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားရေအေးကို လူအများရင်ထဲရောက်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်ပါ. သတ္တ၀ါများအားလုံး အစဉ်အေးမြပါစေသား…။။။။
ပဋ္ဌာန်းကျမ်းအကျယ် down လို့ရမယ်နေရာရှိရင် သိချင်ပါတယ်….
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ၏ ၂၄ ရက် ပဋ္ဌာန်း Links များကို update လုပ်ပြီးပါပြီ။ အားလုံးပဲ လိုသလို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက Mediafire မှာ Free upload လုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ Valid ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြိုးစားပြီးး နောက်ထပ် ထပ်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။
ကျမရဲ့မေတ္တာရိပ်ဆိုဒ်ကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်Technical ပိုင်းမှာ အားနည်းတဲ့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။
ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ကို တင်ပေးထားတာတော့ ခုချိန်ထိတော့ မတွေ့မိသေးပါဘူးရှင်။
ဒီနေ့မှဝင်ကြည့်မိတယ် လေ့လာစရာတွေအများကြီးပါပဲ အသိပညာတို့ရဲ့ တခါးပေါက်ပဲ ဒီလိုတင်ပေးကြသူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
LeaveaReply to Thu Sandar Aung Cancel reply